Ingabe uyazi indlela ukupheka irayisi "Arborio"? Ngokuqinisekile ambalwa abantu bazokwazi ukuphendula yebo embuzweni othi. Ngempela, umkhiqizo elinjalo kuyaqabukela esetshenziswa emizi yesimanje. Nakuba kukhona namanje kukhona abathile ungaphuthelwa ithuba benza ethulwa isithako ukudla okumnandi nokunomsoco.
Ngaphambi kokuthi ngikuxoxele indlela ukupheka irayisi "Arborio" kufanele ngikutshele ukuthi yini lo mkhiqizo.
"Arborio" - uhlobo kruglozernovogo irayisi, ethiwa yokudumisa isigodi ukuthi itholakala e-Italy on ensimini we Po plain. Ngemva ukwelashwa ukushisa, umkhiqizo okunjalo ukungaguquguquki alube futhi "iraba". Lokhu kwenzeka ngenxa okuqukethwe eliphezulu amylopectin isitashi.
Kuvame okwethulwa okusanhlamvu izinhlobo okuphekiwe risotto. Kodwa kufanele wenzenjani-ke uma ungakwazi ukuthola irayisi "Arborio"? Yini engathatha isikhundla sale isithako? Ukuze silungiselele wathi izitsha afaneleka kahle nezinhlobonhlobo ezifana "vialone nano" futhi "Carnaroli".
Ilayisi "Arborio": indlela ukupheka ekhaya?
Ukuze isidlo irayisi waphenduka round mnandi futhi sinempilo, kufanele uzilungiselele ngokuqinile ngokuvumelana iresiphi. Sibheka manje.
Ngakho, sidinga mikhiqizo elandelayo:
Ilayisi "Arborio" - egcwele ingilazi faceted ;
amanzi okuphuza abavamile - ambalwa izingilazi Imi ;
usawoti esihle - engeza ukunambitha;
ushukela omhlophe - ukusetshenziswa ngokubona.
Ngaphambi ukupheka irayisi kufanele siyakazwe kahle emanzini abandayo. Ukuze wenze lokhu, kumele ibekwe ngesihlungo encane. By endleleni, abanye besifazane hhayi wageza lo mkhiqizo, futhi ngokushesha wayendlala endishini noma epanini.
Ngemva irayisi round icutshungulwe, kufanele uqhubeke ne ukupheka yayo. Ngenxa yalesi oluthile lokudla kumelwe abeke endishini ezijulile noma epanini encane, bese uwathele zibe amanzi avamile ukuphuza (1 inkomishi).
Ukubeka izitsha esitofwini, elikuqukethe kufanele alethwe ngamathumba. Lapho amanzi iqala ukubilisa, umlilo kumelwe kuyehla kube sezingeni eliphansi. Ubilise irayisi round kufanele kube imizuzu engu-20 (engasekho), sibhebhezela ngesipuni enkulu njalo.
Njengoba oluthile lokudla ngeke amunca uketshezi esitsheni ukuba kancane kancane engeza amanzi asele.
Ngenxa yokuthi lesi sibalo lula impela ukugaya, kutuswa ngesimo isigamu-wabhaka ukuyisusa isitofu (al dente). Uvalwe uvale lid, umkhiqizo kufanele kwesokunxele sibukela. Ngemva kwemizuzu embalwa irayisi elishisayo "sifinyelele" ngokuzimela futhi ngesikhathi esifanayo ukugcina ezakheke ngayo. Ngesikhathi esifanayo, iphalishi nambitha bese wengeza usawoti uma oyifunayo, kanye noshukela.
Kanjani ukukhonza eyodla?
Ngemva iphalishi okumnandi futhi okunamathelayo, ezenziwe nge- "Arborio", infusions ngaphansi hood futhi ngokugcwele kubiliseni, kungaba ngokuphepha samanje eyodla. Ngenxa yalesi isidlo kufanele bafake ipuleti bese ibhotela ukunambitheka. iphalishi Khonza emangalisayo okumnandi nokunomsoco etafuleni Kunconywa ndawonye sinkhwa of tincetu isinkwa, ibhotela noshizi. Ujabulele ukudla kwakho!
Senza irayisi risotto "Arborio"
Manje uyazi ukuthi ngokushesha futhi kalula ukupheka irayisi "Arborio". Ungadliwa ehlanganisa lo croup, ingase ibe khona ehlukile. Othile senze lo mkhiqizo avalele noma avalele-free iphalishi, kodwa othile - casseroles. Nokho, isidlo ethandwa kakhulu, esetshenziselwa irayisi "Arborio" risotto kuyinto. Uma nakwazi kanjani ukwenza lokhu dish ke sizokutshela ngakho manje.
Ngakho-ke, risotto, sidinga izithako ezilandelayo:
irayisi izinhlobo, "Arborio" - cishe 250 amagremu;
anosawoti inkukhu umhluzi - 500 ml;
inkukhu - 300 g;
onion onion emhlophe - 1 pc.
amafutha omnqumo kungekho ukunambitheka - 30 ml;
iwayini elomile emhlophe - 150 ml;
Basil omisiwe - isipuni;
okunamafutha ukhilimu obukhulu - 100 ml;
pepper kanye nosawoti - esetshenziswa ngokubona;
parsley omisiwe - dessert spoon.
Ukuze ziye zaphumela risotto simnandi kakhulu, qiniseka ukuthi bathenge ilayisi "Arborio" kuphela ( "Mistral"). Ngaphambi ukwelashwa ukushisa kumele kahle siyakazwe emanzini abandayo.
Ngemva croup usulungile, kubalulekile ukwenza ngokucubungula nezinye izithako. Ukuze uqalise ufuna ukuhlanza anyanisi bese nquma kube cubes ezincane. Lokhu kulandelwa hashaza umucu baliqume ngendlela efanayo, ngaleyo ndlela lisuse isikhumba futhi bone.
Frying ukudla phezu kwesitofu
izithako Okwenziwe ezidingekayo ukuqala imithi yabo ukushisa. Ukuze uqale isidlo sensimbi (noma cauldron utyatnitsu) amafutha omnqumo kufanele ukufuthelana ngaphandle ukunambitheka, wayesesibeka ukukhothamela kanye cubes inkukhu amabele. Sauté imifino nenyama isimo ukukhanya kamnandi, kubalulekile ukwengeza round sibalo. Govuza izithako ngesipuni, kufanele uthele iwayini ezomile ezimhlophe bese upheka phezu emlilweni ophansi kuze kuze isiphuzo uye ayahwamuka ngokuphelele. Kungase kuthathe wena emva kwamaminithi ambalwa.
Khona-ke, e-Cookware sensimbi kuyadingeka ukuze uthele kancane inkukhu umhluzi. Ngemva kwalokho isidlo kufanele amboze lid ibila phezu ukushisa eliphansi mayelana ¼ ihora. Kulokhu, kunconywa ukuthi ngezikhathi ezithile ukwengeza umhluzi. Lokhu kumele kwenziwe njengoba Umthengisi ngeke ukuncela uketshezi olunephunga elimnandi.
Washiyela esiteji ekulungiseleleni risotto
Ngemva irayisi a sikhukhumale omncane, futhi inyama ngesisa, uthele esitsheni kufanele basil kanye parsley omisiwe. Yelula isidlo amaminithi ambalwa, kubalulekile ukuze ungeze pepper kanye nosawoti ukunambitha. Ngesikhathi esifanayo cishe risotto eseqedile kufanele uthele ukhilimu esindayo.
Govuza yezingxenye, kuzomele ulinde kuze kube yilapho ubilise, bese ukususa isitsha futhi ushiye isivalo ku okwesikhashana. Lokhu ukuchayeka kuyoba nesandla ukuqedela ukulungiselela izitsha kanye ukugcwaliswa yayo nge izinongo, amakhambi ukhilimu.
Ilungiselela esihlwabusayo irayisi risotto "Arborio" futhi ubambe it in the side dish kungenziwa wakhonza etafuleni, ngelulela amapuleti. Ngaphezu kokudla kwakusihlwa, ungakwazi ukujabulela imifino fresh nocezu isinkwa esinsundu. Ujabulele ukudla kwakho!
izakhiwo awusizo komkhiqizo
Akhuluma ngokuzokwenzeka indlela ukupheka irayisi "Arborio" futhi sisisebenzise simnandi kakhulu futhi eqotho, kubalulekile ukutshela, yini izici ezibaluleke ke anazo.
Okokuqala, ngokungafani kuya irayisi elula, lo mkhiqizo ewusizo kakhulu. Phela, it has lahlukene amaminerali namavithamini. Phakathi kwabo singaqokomisa ikakhulukazi uvithamini B, E, H futhi PP, kanye izakhi trace ezifana iodine, ithusi, i-magnesium, i-zinc, i-calcium nabaningi abanye.
Okwesibili, Ilayisi "Arborio", steamed noma multivarka, azigcina kakhulu zonke izakhiwo yokudla okunempilo. Yingakho kunconywa ukuba asingathe kuphela esebenzisa amadivayisi okukhulunywa.
Okwesithathu, fibre eziqukethwe irayisi "Arborio", kusiza ukugaya futhi kuthuthukisa ke. Umkhiqizo nesitashi lisibekele kahle izindonga emathunjini nasesiswini.
Kufanele kuphawulwe ukuthi ikhono umzimba womuntu wakwazi okukhipha imfucuza ngokungadingekile ngokuhlinzwa uketshezi olunqwabelene enye inzuzo kwalo mkhiqizo. Asinakusho ukuthi leli nani ayiqukethe izinto ezixabana nomzimba, ngakho kwaba lula ukuba ingagxila ngisho abanemizimba ezwelayo nezingane ezincane.
Inzuzo enkulu yale wokudla ukuthi iphekwe ngokushesha okukhulu. Ijubane ngokumangalisayo ukupheka ngenxa isakhiwo okusanhlamvu kuyo, kona has a core okuxekethile selumunca esiningi uketshezi.
Perepechi: iresiphi Isi-Udmurt ophaya
Indlela Yokuthola inyama French namazambane
Ase turkey esihlwabusayo: izinto ezahlukene ongazikhetha ukupheka
Indlela ushintshele komunye igesi komunye? ukudla ngendlela enempilo izingane
Indlela ukukhetha eshibhe, kodwa i-tablet ezinhle?
Watercress: Ingozi kanye nezinzuzo, umsoco, caloric